Koox Afduubtay Dhaqaatiir u Dhalatay Cuba oo Dalbatay Lacag Gaaraysa Sh 150 million. – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Koox Afduubtay Dhaqaatiir u Dhalatay Cuba oo Dalbatay Lacag Gaaraysa Sh 150 million.
Kooxdii afduubka ugu geysatay Kenya labada dhaqtar ee u dhashay dalka Cuba ayaa dalbaday lacago madax furasho ah oo gaarayo Sh 150 million.
Dhaqaatiirtan oo ahaa laba dhaqtar waxaa laga soo afduubtay Mandera iyagoo kusii jeeda isbitaalka Mandera County Refferal Hospital oo ay xilligaasi ka howl galayeen.
Odayaasha dhaqanka Mandera ayaa kulan la qaatay kooxda afduubka ku heysata dhaqaatiirtan, waxaana ay ku kulmeen deegaan u dhaxeen magaalada Bu’ale ee gobolka Jubada Dhexe iyo deegaanka Ceel Cadde oo hoostaga gobolka Gedo.
Duqeydu waxa ay xaqiijiyeen in labadan dhaqtar oo kala ah Dr Herera Correa iyo Dr Landy Rodriguez ay wali nool yihiin.
Wafdiga odayaasha ah ee wadahadallada la yeeshay kooxda afduubka geysatay ayaa sheegay in dhaqaatiirtu ay daaweyn u sameynayaan dadka ku nool gobolka afduubka loogu heysto inkastoo dhaqdhaqaaqooda aad loo xadiday.
Warbixin uu soo saaray sirdoonka kenya ayaa muujineysa in koox burcad ah ay afduubteen dhaqaatiirtan islamarkaana ay ku wareejiyeen dagaalyahanada Al Shabab oo hadda dalbanaya in lasiiyo lacago madax furasho ah oo gaaraya $15 million si ay usii daayaan labada dhaqtar.
Dr Herera Correa iyo Dr Landy Rodriguez oo ah labada dhaqtar ee afduubka lagula kacay ayaa qeyb ka ahaa 100 dhaqtar oo kasoo jeedo dalka Cuba kuwaas oo howlo samafal ah ka fulinayey deegaano kamid ah dalka Kenya.
Afduubka labadan dhaqtar kadib dhaqaatiirtii kale ee ka howl galayey Wajir, Garissa iyo Tana River ayaa isaga baxay deegaanadaas waxaana ay ku laabteen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Dowladda Cuba war qoraal ah oo ay soo saartay afduubka dhaqaatiirtan kadib ayaa waxa ay ku sheegtay inaysan bixin doonin lacago madax furasho ah oo lagu sii deynayo dhaqaatiirtan.